स्कूलमा आफ्नो बच्चा मदत | USAHello | USAHello
एक रोमाञ्चक र चुनौतीपूर्ण स्कूल को शुरुवात. तपाईं स्कूलमा आफ्नो बच्चा मद्दत गर्न आवश्यक हुनेछ. आफ्नो विद्यालयमा छोराछोरीलाई कसरी समर्थन गर्न सिक्न र तिनीहरूलाई सफल मदत.
स्कूल जहाँ बच्चाहरु अधिकांश समय खर्च स्थान हो. तिनीहरूले स्कूल मा भाषा र संस्कृति सिक्न. यसलाई आमाबाबुले मदत गर्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं राम्रो अंग्रेजी थाहा छैन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो बच्चा मदत गर्न सक्छ जो धेरै तरिकाहरू छन्. र तपाईं तिनीहरूलाई देखाउन सक्छौं कसरी आफूलाई मद्दत गर्न! यहाँ तपाईं स्कूलमा आफ्नो बच्चा मदत गर्न मद्दत गर्नेछ केही विचारहरू छन्.
स्कूल मा बच्चा सधैं आफ्नो भावना बारेमा बोल्न हुनेछ. तिनीहरूले यसलाई मा कठिनाई सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर तिनीहरू चिन्तित हुन Aharok चाहँदैनन् सक्छ. तिनीहरूले महसुस अक्सर तिनीहरूलाई कसरी सोध्न. तिनीहरूले अनुरोध भने आफ्नो समस्या बारेमा बताउन बढी सम्भावना हुन्छ.
नयाँ विद्यालय सुरु गर्न गाह्रो. स्कूल को पहिलो दिन अघि आफ्नो बच्चा संग स्कूल भ्रमण. यो तिनीहरूलाई मानिसहरूलाई भ्रमित होइन वा हराएको मान्छे मा पहिलो दिन मद्दत गर्छ.
अन्य खेल र गतिविधिहरु बारे पत्ता
धेरै बच्चाहरु संयुक्त राज्य अमेरिका खेल टोली प्ले. अरूलाई क्लब सामेल वा स्कूल पछि संगीत प्ले. आफ्नो बच्चा कुनै पनि गतिविधिहरु रुचि छ भने तपाईंलाई थाहा. खेल आफ्नो स्वास्थ्य कायम राख्न र मित्र बनाउन मदत गर्नेछ.
म खेल गतिविधिहरु र अन्य गतिविधिहरु फेला
पुस्तकहरू किन्न प्रयास र आफ्नो बच्चा अध्ययन सुरु गर्नु अघि आवश्यक आपूर्ति. तपाईं स्कूल आपूर्ति को लागत खर्च गर्न सक्छन् भने, तपाईंको बच्चाको शिक्षक कुरा. म तपाईंलाई भन्नेछु तपाईं स्कूल आपूर्ति मा मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ.
अमेरिकी विद्यालय छोराछोरीको हेरविचार र तिनीहरूलाई सिकाउन संग चिन्तित हुनुहुन्छ. साथै, शिक्षकहरू र अमेरिका धेरै प्रत्यक्ष छन्. तपाईं कुनै पनि व्यवहार समस्या बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु हुनेछ. स्कूल मा एक धेरै सानो बच्चाको लागि, तिनीहरूले तपाईंलाई मुद्दाहरू आफ्नो शरीर संग बताउन सक्छ. उदाहरणका लागि, एक पूर्व-विद्यालय शिक्षक आफ्नो बच्चा पेट समस्या भोगिरहेका वा छाला दाना भोगिरहेका छ भनेर बताउन सक्छ. यो असहज बनाउँछ भने, शिक्षक आफ्नो बच्चा मद्दत गर्न खोजिरहेको छ कि सम्झना. तपाईं समस्या बारे इमानदार कुरा गरेर आफ्नो बच्चाको शिक्षक समर्थन र समाधान पाउन सक्नुहुन्छ.
दिन हेरविचार र पूर्व-विद्यालय
छोराछोरीले बच्चाहरु हुँदा दिन हेरविचार जाँदै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. केही बच्चाहरु जाने सक्नुहुन्छ (दिन परवाह) दुई महिना पुरानो रिपोर्ट. सामान्यतया तिनीहरूले को उमेर मा बच्चाहरु छन्4वा5वर्ष जब तिनीहरूले बाल सदन सुरु. तिनीहरूले मदत चाहिन्छ जब यो छ भन्दा.
लुगा र लगाउन सजिलो हो कि जूता फेला पार्न र तिनीहरूलाई बन्द लिन्छ
को नर्सरी र दिन हेरविचार मा शिक्षकहरू लुगा लगाउन धेरै छोराछोरीलाई सिकाउन र तिनीहरूले किन्न सक्छन् जब तिनीहरूलाई मदत गर्न. जब लुगा छोडपत्र गर्न सजिलो हो, तपाईं बच्चा र दुवै शिक्षक मदत.
एउटै स्कूल तालिका राख्न
आफ्नो बच्चा एक झपकी लिन्छ वा स्कूल मा एक शान्त समय छ भने, म यसलाई मा घर के. तिनीहरूलाई स्कूल तालिका पछ्याउन लागि तिनीहरूले सजिलो बनाउनेछ.
पढाइ छोराछोरीलाई जवान हुँदा सुरु गर्न एक राम्रो बानी हो. पढाइ स्कूलमा राम्रो आफ्नो बच्चा मद्दत गर्छ. धेरै पटक एक हप्ताको र सुत्नेसमय आफ्नो बच्चा पढ्न प्रयास. यदि तपाईं राम्रो अंग्रेजी थाहा छैन, हास्य किताबहरु खोज्न र तस्बिरमा के भइरहेको छ तपाईंलाई बताउन आफ्नो बच्चा सोध्न. तपाईं पनि सँगै अंग्रेजी अक्षरहरू सिक्ने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्नो बच्चा पाँच वर्षको उमेरमा पहिलो ग्रेड सुरु हुनेछ. यसलाई प्राथमिक विद्यालय र मध्य ग्रेड समावेश 1 गर्न 8.
आफ्नो दिनचर्या गृहकार्य ठाँउ
संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु हरेक दिन गृहकार्य को प्रकारको हुन्छ. तपाईं कम से कम हरेक रात सबै गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ. के तपाईं काम गरिरहेका छौं के बुझ्न भने, उसलाई त तपाईंलाई बताउन अनुरोध. जब तपाईं तिनीहरूलाई मदत गर्न प्रयास.
पत्ता लगाउन आमाबाबु र शिक्षकहरूको सभाहरू धाउन निश्चित हुन कसरी आफ्नो बच्चाको प्रदर्शन. तपाईं एउटा दोभासे आवश्यक छ भने, शिक्षक प्रारम्भिक सोध्न आफ्नो बच्चा बताउन. बाधा हुन सक्छ केहि बारेमा शिक्षक कुरा गर्न नडराऊ.
म पढ्न राख्न!
हरेक दिन आफ्नो बच्चाहरु संग पुस्तकहरू पढ्न सम्म तिनीहरूले धाराप्रवाह पाठकहरूलाई छन्. यदि तपाईं अंग्रेजी थाहा छैन, तपाईं अंग्रेजी अनुवाद तपाईं पढ्न बच्चा अनुरोध गर्न सक्छ. धेरै बच्चाहरु भिडियो खेल खेल्न वा टिभी हेर्न वा यो उमेर मा सामाजिक सञ्जाल साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ. आफ्नो समय चयन गर्न निश्चित हुनुहोस् र देखाउँछ कि पढाइको कार्य.
तिनीहरूले चौध वा पन्ध्र वर्षको उमेरमा हुँदा बच्चाहरु सामान्यतया उच्च विद्यालय सुरु. उच्च विद्यालय यसलाई विभिन्न चुनौतीहरू ल्याउँछ.
स्कूल बारेमा आफ्नो बच्चा हरेक दिन संग कुरा राख्न
यो उमेर मा, आफ्नो बच्चा तपाईं यसलाई प्रयोग रूपमा धेरै बताउन सक्छ. तिनीहरूले जान्न के कुरा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन र तिनीहरूले कसरी महसुस.
आफ्नो बच्चा खेल वा गतिविधिहरु छ भने, यदि सम्भव यसलाई जाने. संयुक्त राज्य अमेरिका मा आमाबाबुले देखा छोराछोरीको समर्थन. यो पनि तपाईं आफ्नो समुदायमा थप मानिसहरूलाई भेट्न मदत गर्न सक्छ.
निम्न कदम बारे कुरा
विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय योजना को संयुक्त राज्य अमेरिका मा सुरु गर्दा उच्च विद्यालय छ. आफ्नो योजना तपाईंको बच्चाहरु प्रोत्साहन. क्यारियर योजना र कलेज संग स्कूल देखि मद्दत प्राप्त.
एक बच्चाको रूपमा स्कूल सुरु मा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू बारेमा आप्रवासी महिला संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बोल्छ. आफ्नो बच्चा मदत कसरी केही सुझावहरू.
सामाजिक मिडियामा तपाईंको सुरक्षाको राख्न
म कलेज कसरी जाने?